ODC – Orange: fampivoarana ny nomerika eto Madagasikara | NewsMada
ODC – Orange: fampivoarana ny nomerika eto Madagasikara
Nifanaraka ny Orange solidarité Madagascar sy ny GIZ*, tamin’ny desambra 2019, nankatoavin’ny minisitera alemà momba ny fiaraha-miasa sy ny toekarena. 30 tapitrisa euros ny atokana ho an’izany fiaraha-miasa izany, mikendry ny fananan’ny tanora asa, ny fampandrosoana ny indostria sy ny fanavaozana nomerika amina firenena 14 aty Afrika.
Hisian’ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Orange sy ny GIZ, endrika iray iarahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina, hampandrosoana ny fifehezana ny lafiny nomerika. Tsy latsaky ny 20 000 ny tanora sy asa 8 000 no hita any amin’ireo firenena ireo noho izao fiaraha-miasa izao.
Endrik’izay fiaraha-miasa izay eto Madagasikara, ny ataon’ny Orange Solidarité Madagascar sy ny GIZ, mametraka ny Orange Digital Center hanamafisana ny asa. Kendrena amin’izany ny hidiran’ny rehetra amina nomerika, hisian’ny fampandrosoana maharitra nofaritan’ny Firenena mikambana. Nomerika hiasana ho fampivoarana ny lafiny sosialy sy toekarena, hanohanana ireo tanjona napetraky ny governemanta eto Madagasikara.
Tsiahivina fa misy ny Orange Digital Center (ODC), manofana tanora amina toerana iray amin’ny ambaratonga teknika maro sy tetikasa samihafa. Hita amin’izany, ohatra, ny start-up « Orange Fab », ny FabLab Solidaire de la Fondation Orange, ny Orange Ventures Africa. Tombontsoa ho an’ny vahoaka ny atao amin’izany rehetra izany.
GIZ* : Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit